पत्रकार एवं कलाकार पराजुलीले दिए तीजको सौगातःशिकारी (भिडियो ) | ebaglung.com
पत्रकार एवं कलाकार पराजुलीले दिए तीजको सौगातःशिकारी (भिडियो )
२०७४ श्रावण ४, बुधबार २१:१०	Top News, अन्य समाचार, मनोरञ्जन 478 पटक हेरिएको !
पर्वत, २०७४ साउन ४ । धमाधम तीजका गीतहरु सार्वजनिक मभैरहदा अर्को पृथक मौलिक तथा पृथक शैलीको शिकारी गीती संग्रह सार्वजनिक गरिएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रेम विवाह र त्यसले समाजमा निम्त्याउने असर तथा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई गीतमा समेटिएको छ ।
मौलिक शब्दहरुलाई स्थान दिईएको “ शिकारी ” बोलको तीज गीतलाई गाउघरमै गाउने नाचिने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । आको केटी हेर्न लाई भनी मै आउने ठाउँ आरहीछ यो पनि जस्ता शब्द समेटिएको तिज गितमा एउटी केटी हेर्न २ जना केटा एकै ठाउँमा गएको कथा उतारिएको छ । सामाजिक परिवेशमा आधारित गीतमा स्वरः माधव पराजुली, तेजेन मल्ल र प्रतिभा कुँवरको रहेको छ ।
तेजनः पहिला भन्दा झन राम्री भईछन्,तिजको मेला हेर्न लाई गईछनरे ।।
माधबः लाईछन शारी तिजैको मेलामा,छिनो फानो हुन्छ यहीँ बेलामा ।।
प्रतिभाः तिजको ब्रत उस्कै लाई बस्ने छु शिव जस्तो पाए कम्मर कस्ने छु ।।
हीजोआज यस्ता गीतहरुले कम स्थान पाउने गरेतापनी खासगरी यीनै गीतहरुमा मौलिक लोकपन भेटिन्छ !
उक्त गितमा लय मौलिक गीत र दोहोरी गीत संगीतमा तथा पत्रकारीतामा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई सकेका गायक एवं पत्रकार पराजुलीको रहेको छ भने शब्द छोटो समयमै लोकगीतमा चर्चामा आएका अत्यान्तै व्यस्त सर्जक तेजन मल्लको रहेको छ ।
पराजुलीको उक्त गीतमा प्रमोद अधिकारी, करिश्मा कुँवर,प्रविन देवकोटा डिल्लीराज पराजुलीको अभिनय रहेको छ । धेरै भन्दा धेरै मिहेनतका साथ पर्वतको कुश्मामा छायांकन गरीएको यस गीतको निर्देशन प्रविन देवकोटा र छायांकन अनुरागको रहेको छ भने सम्पादन नविन केसी मगरको छ ।
उक्त गीतलाई कामना डिजिटल म्यूजिक प्रा.लि.ले बजारमा ल्याएको हो ।
“बजारमा पनि मायाप्रेम बिक्ने गर्छ र अहिलेको समाजले बढी नै रसिक र ठट्यौली गीत मन पराउने हुँदा हामी पनि त्यस्तै गीत गाउन बाध्य भयौँ,” गायक पराजुलीले भने ।शिकारी बोलको गीत एक पटक हेर्न छुटाउन नहुने उनको तर्क थियो ।
पराजुली सहित तेजन मल्ल र गायिका प्रतिभा कुवँरले ३ जनाले यो वर्ष गाएको शिकारी’ बोलको गीतले छोटो समयमै चारै तिर चर्चा बटुलेको छ ।
उहाँले यस अघि झण्डै दर्जन भन्दा बढि लोक गीतहरु बजारमा ल्याईसकेका छन् । लोक संगितमा मौलिकपन हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउदै आएका पत्रकार समेत रहेका पराजुलीले टिफिकल मौलिक गीतलाई स्थान दिएको बताए । उसोत पछील्लो समय तिज गितमा बिकृति बिसंगति बढी भित्रिएको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त गितले अन्य कलाकार लाई मौलिक मार्गमा हिडाउ प्रेरित गर्ने छ ।
गनपा ८ काँडेवासका लागि विनियोजित बजेट